Rooble ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ugu yeeray inay is dejiyaan islamarkaana xafiiskiisa… – Hagaag.com
20 Janaayo 2021 in World // Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa loo kale dhaariyey Madaxweyne iyo M/weyne ku xigeen…
20 Janaayo 2021 in National // Axmed Madoobe ayaa Beesha Caalamka kulan kula qaatay habka maqal iyo muuqaalka…
20 Janaayo 2021 in National // Farmaajo ayaa loogu baaqay inuu ka hadlo xaaladda dhalinyaro tababar loogu qaaday Eritrea…
20 Janaayo 2021 in World // Masar iyo Qatar ayaa ku heshiiyey in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee go’ay…
20 Janaayo 2021 in Lifestyle // Xero loogu talagalay barakacayaasha ee waqooyiga Suuriya ayaa quustay kadib roob halkaasi…
Rooble ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ugu yeeray inay is dejiyaan islamarkaana xafiiskiisa…
Posted on 28 Diseembar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Ra’iisal Wasaaraha Somalia, Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka iyo shacabka Soomaaliyeedba inay is dejiyaan, diyaarna uu u yahay inuu la fariisto cid kasta oo cabasho ka qabta geedi-socodka arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Ra’iisal Wasaaraha oo xalay shir jaraa’id ku qabtay Xafiiskiisa Magaalada Muqdisho ayaa marka hore faah faahiyay kulamo uu la yeeshay Wakiilada Beesha Caalamka iyo Ururada Bulshada.
“Waxaan rabaa halkaan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed in aan hadda ka soo baxay shir aan la yeeshay Beesha Caalamka, Safiiradeeda kala duwan ee u joogga Somalia. Waxaan ka wadahadalnay waxyaabihii noo qabsoomay, doorashada heerka ay mareyso iyo sida aan u daadihin lahayn, loona gaari lahaa doorasho. Waxaan kaloo ka wadahadalnay sidii loo dardargelin lahaa doorashadan, loona gaari lahaa hadafka ah inay dalka ka dhacdo doorasho.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa yiri “Sidoo kale waxaa jirtay in aan Sabtidii la kulmay Ururada Bulshada, Culima’udiinka, haweenka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed, shirkaas oo aan kaga hadalnay arrimaha doorashooyinka, iyagoona ii sheegay inay la kulmeen walaalahayaga qaybahooda kala duwan ee daneynaya inay ka qaybgalaan doorashada madaxweynenimada. Si saraaxad leh oo wanaagsan ayaan uga doodnay, iskuna qancinay, waxaana isku afgaranay dhammaanteenba in aan loo baahnayn wax dalkan dhibaato gelinayo ama xasilooni darro gelinayo inaan lagu dhaqaaqin oo shacabka masaakiinta ah loo naxo.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaan kaloo isku afgaranay in wadahadaladeena ay socdaan, joogtana ay yihiin, gaar ahaan anigana aan u sheegay markasta Culima’udiinka, Ururada Bulshada iyo haweenkaba inaan diyaar u ahay inay ii yimaadaan, qof kastoo daneynaya ama cabasha qaba, sidoo kalana aan u sheegay inay ila fariistaan, diyaarna u ahay inaan cabashadooda xaliyo, haddii ay ahaan laheyd doorashada, mid guud iyo mid gaar ahaaneedba.”
Waxa uu intaa ku daray “Sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa is dejiya, aniga oo mas’uul ka ah xukuumadda, Ra’iisal Wasaarahana ka ah waxaan idin sheegayaa inaan diyaar u ahay inaan qof kasta qaabilo, kalana hadlo wixii caqabad ah ama cabasho ah ay dareemayaan inay jirto.”
Rooble ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ugu yeeray inay is dejiyaan, isla-markaana uu xafiiskiisa u furan yahay cid kasta oo tabasho ka qabta arrimaha doorashooyinka.
“Sidoo kale waxaan leeyahay dadka walaalahayaga oo tabaya ama qaba cabasho ku saabsan arrimaha doorashada in uu u furanyahay xafiiskeyga, albaabkeyga iyo wejigeyga, diyaarna aan u ahay inaan idin qaabilo. Anigoo diyaar u ah sidoo kale cabashadiina inaaan tixgeliyo, idinkala fadhiisto oo aan xal waara ka gaarno, waxaan leeyahay is dejiya.” Ayuu yiri Rooble.
Hadalka ka soo yeeray Rooble ayaa ku soo aadaya, xilli Golaha Midowga Musharaxiinta ay Arbacadii si weyn uga horyimaadeen Jadwalka Doorashooyinka Xildhibaanada Labada Aqal, ee ay soo saareen Guddiyada Doorashooyinka ee lagu muransan yahay.
About Admin (12840 Articles)
Dutch government to introduce first curfew since World War II: RTL…
Trump pardons ex-aide Bannon but not himself or family…
Biden intelligence pick favors ‘aggressive’ stance on China threat…